လက်ကမ်းစာစောင်တောင်းဆိုခြင်း (ပြင်သစ်) - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
Étudier et obtenir un ဇာတ်စင်လုပ်ခ
en tant Que développeurက de logiciels aux ဆောင်သော-Unis
Étudierplein ဆွဲပြား Les 8 à9Premier မော sur Notre ကျောင်းပရဝုဏ်တက္ကသိုလ်နှင့်ကျောင်းများမှုတွင်ယာယီà qui est Entier အသိအမှတ်ပြု။ il est situ prèsက de ချီကာဂို, aux ဆောင်သော-Unis ။
dans plein မှုတွင်ယာယီà Obtenez un ဇာတ်စင်လုပ်ခ Les ပေါင်း Entreprises grandes အမေဇုံ et Microsoft က en tant Que développeurက de logiciels comme ။ က Les salaires က de ဦးစီးဌာန sont en moyenne က de 80,000 ဒေါ်လာတန်းတူ Anne.
Recevez Une လက်ထောက်ဘဏ္ဍာရေးimportante ပြန်လည် avec faible paiement ကနဦး။
Apprenez Les derniers développements logiciels avec nos professeurs Ph.D ဘွဲ့ကို
Rejoignez 2500 internationaux diplômés 700 nos et en cours က de ဖွဲ့စည်းရေးétudiants။
Baccalauréat en Informatique က de3à4ပေးစေလိုပါတယ် ou en un sujet reliéà l'Informatique ။
Besoin d'Une moyenne က de d'au Moines 2,7 sur4ထောက်ပြသည်။
Expérience professionnelle en tant qu'ingénieur logiciel: au Moines6မော d'အတွေ့အကြုံကို avec un diplôငါ့ကိုက de4ပေးစေလိုပါတယ်ou au Moines က de 1 à3ပေးစေလိုပါတယ် d'အတွေ့အကြုံကို avec un diplôငါ့ကိုက de3ပေးစေလိုပါတယ်။
က Les sur le étudiantsက de graduer ainsi Que ceux က de ထောက်ပြdernièAnn ပြန်လည်EE qui sont ကိစ္စများ des Universités, et ayant Une Haute moyenne က de အချက်များ, peuvent ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်း meme s'ils n'ont pas ဃ '' meilleuresEXPérience professionnelle.
Connaissance က de နေ C, C #, C ++ ou ဂျာဗား
anglais en Bonnes အရည်အချင်း
Télécharger votre လက်ကမ်းစာစောင်အကျုံး
နေထိုင်ရာတိုင်းပြည် အဘူဒါဘီ အာဖဂန်နစ္စတန် အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမေရိကန်ဆာမိုအာ အင်ဒိုရာ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အန်ဂွီလား အန္တာတိက ဂွါ & ဘာဘူဒါ အာဂျင်တီးနား အာမေးနီးယား Aruba (နက်။ ) ၾသစေတးလ် သြစတြီးယား အဇာဘိုင်ဂျန် Azores (ဆိပ်ကမ်း။ ) ဘဟားမား ဘာရိန်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘာဘေးဒိုးစ ဘယ်လာရုစ် ဘယ်လ်ဂျီယမ် belize ဘီနင် ဘာမြူဒါ ဘူတန် ဘိုလီးဗီးယား ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့ဆွာနာ ဘရာဇီး British Virgin Islands ဘရူနိုင်း ဘူလ်ဂေးရီးယား Burkina Faso ဘူရွန်ဒီ ကမ္ဘောဒီးယား ကင်မရွန်း ကေနဒါ ကိပ်ဗာဒီ ကေမန်ကျွန်းစု ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ချဒ် ချီလီ တရုတ်နိုင်ငံ ခရစ္စမတ်ကျွန်း ကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများ ကိုလံဘီယာ ကော်မ္မရိုဇ့် ကွန်ဂို ကွတ်ကျွန်းစု ကော့စတာရီကာ ခရိုအေးရှား ကျူးဘား ဆိုက်ပရပ်စ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Dahomey / ဘီနင် ဒိန္းမတ္ ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ဒိုမီနီ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ အီကွေဒေါနိုင်ငံ အဲဂုတ္တုပြည်၌ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ အီရီထရီးယား အက်စ်တိုးနီးယား အီသီယိုးပီး ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု ဖရိုးကျွန်းစု ဖီဂျီ ဖင်လန် Fmr Yug ကိုယ်စားလှယ်မက်ဆီဒိုးနီးယား ပြင်သစ် ပြင်သစ်ဂီယာနာ ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်အန္တာတိကသည် gabon ဂမ်ဘီယာ Georgia ဂျာမနီ ဂါနာ ဂျီဘရောလ် ဂရိနိုင်ငံ ဂရင်းလန်း နေးဒါ Guadeloupe ဂူအမ်ကျွန်း ဂွာတီမာလာ ဂါဇီး ဂီနီနိုင်ငံ ဂီနီဘစ် ဂိုင်ယာနာ ဟေတီ ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟောင်ကောင် SAR ဟန်ဂေရီ အိုက်စလန် အိႏၵိယ အင်ဒိုနီးရှား အီရန် အီရတ် အီရတ်-ဆော်ဒီအာရေဗျကြားနေဇုန် အိုင်ယာလန် ဣသရလေ အီတလီ အိုင်ဗရီကို့စ် ဂျမေကာ ဂျပန် ဂျာစီ ယော်ဒန်မြစ် ကာဇက်စတန် ကင်ညာ ကီရီဘာတီ Korea Dem ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ကိုရီးယား, သမ္မတနိုင်ငံ၏ ကူဝိတ် ကာဂျစ္စတန် လာအိုနိုင်ငံ လတ်ဗီးယား လေဗနုန်တော လီဆိုသို လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ လစ်ဗျားအာရပ် Jamahiriy လီချင်စတိန်း လစ်သူ လူဇင်ဘတ် မကာအို မက်ဆီဒိုးနီးယား ဒါဂတ်စကာ မာလာဝီ မေလးရွား မော်လ်ဒိုက် မာလီ မော်လ်တာ မာရှယ်ကျွန်းစု မာတီနစ် Mauritania မောရစ်ရှ မက္ကစီကို မိုက်ခရိုနီးရှား, ဗဟိုဘဏ် Stat မော်လ်ဒိုဗာ, သမ္မတနိုင်ငံ မိုနာကို မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး မွန်ဆာရတ် မော်ရိုကို မိုဇမ်ဘစ် ျမန္မာႏုိင္ငံ နမီးဘီးယား Nauru နီပေါ နယ်သာလန် နယ်သာလန်အန်တီ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား နယူးဇီလန် နီကာရာဂွာ နိုင်ဂျာ နိုင်ဂျီးရီးယား နီယူး Norfolk ကျွန်း မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ ေနာ္ေဝး အိုမန် ပါကစ္စတန် ပလောင်းကျွန်းစု ပနားမား ပနားမားတူးမြောင်းဇုန် ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ ပါရာဂွေး ပီရူး ဖိလစ္ပုိင္ Pitcairn-ကျွန်းများ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ Puerto Rico ကာတာနိုင်ငံ ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း ရိုမေးနီးယား ရုရှားပြည်ထောင်စု ရဝမ်ဒါ စိန့်လူစီယာ စိန့်မာတင် ဆာမိုအာ ဆန်မာရီနို Sao Tome & Principe ဆော်ဒီအာရေဗျ senegal ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ seychelles ဆီယာရာလီယွန် စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆလိုဗက်ကီး ဆလိုဗေးနီး ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ဆိုမာလီယာ တောင်အာဖရိက စပိန် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ စိန့်ဟယ်လီနာ စိန့်ကစ် & နေးဗစ် စိန့်လူစီယာ စိန့်ဗင်းဆင့် & Grenadine ဆူဒန် ဆူရာနမ် ဆွာဇီလန် ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဆွစ်ဇလန် ဆီးရီးယားအာရပ် ထိုင်ဝမ် Tajikistan တန်ဇန်းနီးယား ထုိင္းႏုိင္ငံ တိုဂို Tonga ထရီနီဒက် & တိုဘာဂို တူနီးရှား ကြက်ဆင် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် တူရကီထိုအကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများ Tuvalu အမေရိကန် Virgin Islands ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူကရိန်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥရုဂွေး ဥဇဘက် ဗာနူအာ ဗာတီကန်စီးတီး (သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုကြည့်ပါ) ဗင်နီဇွဲလား ဗီယက်နမ် ဗာဂျင်းကျွန်းစုများ - ဗြိတိသျှ အနောက်တိုင်းဆာဟာရ အနောက်ပိုင်းဆာမိုအာ ယီမင် ယူဂိုဆလားဗီးယား ဇိုင်ရီ ဇမ်ဘီယာ ဇင်ဘာဘွေ
Quelques နည်းလမ်းနမူနာက de Grand Entreprises classées Fortune မဂ္ဂဇင်း 500
eu des အဆင့် ont lesquelles nos étudiants dans
"mum est un milieux က de est ကြောက်မက်ဖွယ်စံပြ et သား SYSTEM d'Education တု။ က Les serviables et toujours souriants, sont respectueux gens ။ vous continuez à grandir dans la connaissance ... j'adore cela, en particulier étudier des sujets tels Que la sécurité informatique, Les SYSTEM d'ခေါင်းပုံဖြတ်, le développementက de logiciels avancés။ "
အိုမာ Menjikuo MefireCamaroun